Alahady 30 Desambra 2018. – FJKM
Alahady 30 Desambra 2018.
Ny ABDin’ny fahombiazana
Raha te- hahomby ianao
D-Diniho ny fianam-bavakao
Ahoana no fiafaran’ity tantara ity ?
« Ary rehefa tonga tao an-trano i Jesoa dia nanontany Azy mangingina ny mpianany hoe: izahay sy nahavoaka azy . Ary hoy Izy taminy : « iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin’inona na amin’inona , afa-tsy amin’ny fivavahana sy ny fifadian-kanina ihany » (Mar 9.28-29).
-Satria ny vavaka no tsiambaratelon’ny fahombiazana
Mitaky vavaka ny fahombiazana .Raha te- hahomby amin’ny ady amin’ny devoly, mivavaha!Raha te- hahomby amin’ny fanasitranana , mivavaha!raha te-hahomby amin’ny fitaizana zanaka maditra, mivavaha!.Raha te- hahomby amin’ny asa ampanaovin’ny Tompo , mivavaha!Ianareo tsy nahavoaka azy , hoy i Jesoa , satria tsy ampy vavaka . « Iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin’inona na amin’inona , afa-tsy amin’ny fivavahana ihany ». Koa diniho ny fiainam-bavakao! »
–Satria vavaka ifotorana no takin’ny fahombiazana . izany no ambaran’ny fifadian-kanina miaraka amin’ny vavaka eto. Tsy vavaka vonjy tavanandro amin’ny fotoana mahaporitra ihany, fa vavaka iainana. tsy vavaka vonjivonjena eo ankatoky ny fanadinana fotsiny , ohatra , fa vavaka mandavataom-piainana. Tsy vavaka anekena hampandefitra zavatra hafa (tele,radio…) mba hanaovana azy . Koa diniho ny fianam-bavakao!
« Bokikelin’ny fahombiazana« IAA